Thaabit Cabdi Maxamed ayaa waxa uu kormeer ku tagey hoyga Senator Cabdi Xasan Cawaale (Qaybdiid) – STAR FM SOMALIA
Gudoomiyaha Maamulka Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho, ayaa waxa uu kormeer ku tagey hoyga uu Magaalada Muqdisho ka degan yahay Senator Cabdi Xasan Cawaale (Qaybdiid), ka dib markii la weeraray.
Thaabit Cabdi Maxamed, ayaa u tagey guriga Cabdi Qaybdiid, sidii uu ugu muujin lahaa sida Maamulka Gobolka Banaadir kaga xun yahay tallaabada sharciga ka baxsan ee gurigiisa lagu weeraray.
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir, ayaa soo kormeeray qaybaha uu ka kooban yahay dhismaha Cabdi Qaybdiid oo ku yaala Degmada Hodan, waxaana uu u muujiyay sida uu kaga xun yahay xadgudubka lagula kacay.
Intii uu kormeerkan ku guda jiray Duqa Magaalada Muqdisho, ayaa waxa uu warbixin ka dhageystay Cabdi Qaybdiid, oo uga waramay dhibaatada soo gaartay gurigiisa.
Masuuliyiin kala duwan, ayaa saacadihii ugu dambeeyay tagaayay hoyga la weeraray, si ay dhibaatada soo gaartay ula wadaagan Senatorka Aqalka Sare ee Baarlamaanka Somaliya ka tirsan.
Weerarkan, ayaa sida la sheegay waxaa ka dambeeyay ciidan ka tirsan kuwa Dowladda Somaliya, oo Emirate-ka Carabta uu ku tababaray Magaalada Muqdisho, iyagana u daacad ah.
Weerarkan, ayaa waxa uu xoojiyay shakigii ay dadka Somaliyeed ka qabeen doorka siyaasadeed ee Emirate-ka Carabta ee dalka, waxayna dadku weerarkan ku macneeyeen mid muujinaya fawdada iyo xaaladda adag ee Emirate-ku la damacsan yahay Somaliya.
Askar iyo Saraakiil Ayaa Loo xirxiray Dhacadii lagu Galay guriga Cabdi Qeybdiid.